पक्का पक्की भयो, वनमाराले सतिसाल ढालेन | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, चैत्र १५, २०७७ मा प्रकाशित
काका ! अब एउटा चिठ्ठी लेख ! त्यो पनि विन्तिपत्रको शैलीमा तरक्क आँशु झारेर, पुराना अमानवीय कर्तुतहरुप्रति घोर पश्चाताप गर्दै रोएर लेख !
के भन्छ यो भिरघरे ! कसलाई चिठ्ठी लेख्नु, कसलाई विन्तिपत्र लेख्नु ! कोसंग विलौना गर्नु ! तैले के भनेको मैले बुझ्दै बुझिन !
मैले भनेकोनी काका अब तिमार्को पार्टी के अरे त्यो उजाति ! माओवादी कि माओवादी केन्द्र के छ अहिले ! हो त्यो अब छैन । त्यस कारण एमालेमा एक-एक जना गर्दै प्रवेश गर्न पाउँ, पहिलाका गल्तीहरु माफ पाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चिठ्ठी लेख भनेको !
तैंले पनि हेप्न थालिस भिरघरे । हामीलाई अहिले तोड परेका बेला, ओरालो लागेको मृगलाई बाघले झम्टा हानेपछि, दुनियाले खेदो खनेको बेलामा तँ पनि ओली समक्ष विन्तिपत्र हालेर लत्रिनु भन्छस् हैन ? यो कदापी हुन सक्तैन ।
काका ! तिमार्को पार्टी सङ्गठन छैन । नेता पनि फाट्टफुट्ट गर्दै सकिए । जनताले रुचाएनन् । यस्तो बेला के गर्ने ? टेक्ने जमिन र समाउने हाँगो नभएपछि कि त शरणमा जानु पर्‍यो कि त आत्मा ह…!
के वाइयात कुरो गर्छस् भिरघरे ! तँ काँग्रेसको नेता भएर पनि ओलीको भक्त भए झैं कुरो गर्दैछस् । हेर अझै हाम्रो तिक्डम चल्दै छ । एमाले समाप्त पार्ने योजनाबाट हामी विचलित भएका छैनौं । सर्वोच्च अदालतले छातीमा वज्रप्रहार नगरेको भए हाम्रो काम्रेड प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री भै सक्थे ।
नाप्पियो । तिमी बुढा पनि हावादारी कुरो गर्छौ । जसलाई जनताले पत्याउदैन, जस्को कार्यकर्ता, नेता छैनन् त्यस्ता चै ओलीको प्रतिद्वन्द्वी हुन्छ ?
तँ झुम्री पनि निकै मै हुँ भन्दै छेस् । अहिले पनि हाम्रो समर्थनमा ओलीको सत्ता टिकेको छ । समर्थन फिर्ता लिने हो भने अहिलेको अहिले, ठाउँको ठाउँ ओलीलाई ढाल्न सक्छौ । नाप्पिएको कुरो नगर्दा हुन्छ । केही प्राविधिक कारणले मात्र हामी रोकिएका छौं । होइन भने यो सरकारलाई हामीले जानेको थियो ।
के जानेको थियो ? वनमाराले सतीसाल ढाल्दैन काका ! ओलीको काँधमा बसेर फोहोर गरेका थियौ । फोहोरी र घिन लाग्दो र’छ भनेर ओलीले हुत्याई दिएपछि आफ्नो औकात थाहा पायौ ?
केही कुराहरु तैले भनेको ठिकै हो भतिज भिरघरे । हाम्रो काम्रेडले ओलीलाई चार पटक त पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेकै हो । माधव नेपालहर्ले पनि हामीलाई साथ दिएकै थिए । तर, माधव नेपालहरु केपी जस्तो दह्रो हैन रा’न । एमालेका सांसदहरु सप्पै ओलीतिरै, केन्द्रीय सदस्य पनि बहुमत उत्तै ।
त्यै त काका ! सांसद उतै, केन्द्रीय सदस्य उतै, जनता उतै, हुँदाहुँदा माओवादीका २०।३० जना नेता पनि उतै अनि ओलीसंग निहुँ खोज्ने चैं तिमारु । एमालेको शक्तिमा तिमारु उफ्रेको अलिअलि होइन । बल्ल आफ्नो साइजमा आई पुगेका छौ । अब बलिन्द्र धारा आँशु चुहाउँदै विन्तिपत्र हाल। नत्र समाप्त !
वास्तवमा अहिले हेर्दा हामी भरङ्ग भएका छौं । २३ गते दिउँसोसम्म हाम्रो चुरिफुरी नै अर्को थियो । अदालतले आ-आफ्नो घर जाउ भन्यो । एमालेहर्को घर ओलीले सृुरक्षित राखी दिएछन् । उनारु फर्किए, हाम्रो त घर भए पो फर्किनु । अरु आ-आफ्नो दर्गा-दिशा लागे । हामी भने अहिले माउ हराएको कुखुराको चल्ला जस्तो भएका छौ । चिहिल-विहिल भयो भिरघरे ।
आत्तिनु हुँदैन काका ! हाम्रो देउवा दाइले भने जस्तो चुनापमा जानु पर्छ । माओवादीको पनि १।२ सिट आउन सक्छ । अरु एमाले र हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
हो नि भतिज । यी बुढा कुरो बुझ्दैनन् । एमालेतिर प्रवेश गर म मिलाउँछु भन्दा पनि मान्दैनन् । यिर्नाका प्रचण्ड । फुटो घैंटो पोखियो अपराध ! लु गर ओलीलाई कारवाही । माधव नेपालको खाल पनि लुइँ लुइँ गएर गुटुङटुङ बालुवाटारतिर छिर्‍यो ।
यो झुम्रीको विश्लेषण अहिलेसम्म मिल्दै छ । म त हाम्रो प्रचण्डको हुँङकार र फाँफाँफुँफुँ देख्दा त केही छ भनेर मख्खै परेको थिएँ । भरे त दमाहा पो रछ । बाहिर भयङ्कर आवाज भित्र खोक्रो ।
एक पटक फेरि भैंसी पूजा गर्दा दशाग्रह सप्रिन्थ्यो कि ! बैद्य, डाक्टर, झाँक्री, धामी कसैले ठिक गर्न सकेन । आफू मोटाए, पार्टी कुपोषण लागेर मरी सकेछ। काका पनि बङ्गुर र बाख्रा पालन तिर लाग । आफ्नो नेतालाई पनि भैंसी पूजा गर्न भन ।
खै भतिज । प्रचण्ड काम्रेड पनि दुब्लाएर खिन्यौटे भाका छन् भन्दै थिए । विचरा ओलीलाई सिध्याएँ भन्दै थिए आफु सिद्धिएको थाहै पाएनन् । अदालतले हाम्रो विल्लीबाठै बनायो । न विउ रोप्ने खोरिया, न गरी खाने पाखो, न त टाउको लुकाउने ठाउँ, कहाँ ओत लाग्ने ? सम्झदा मलाई त खुइय आउँछ भने प्रचण्डलाई कस्तो भएको होला !
हौ काका ! अब रुवावासी गरेर के गर्छौ ? ओलीले शरण देकै थियो । शरणको मरण बनाएर प्रचण्ड आफैंले सकेका हुन । लौ काका-काकी कुरो यस्तै
हो । म लागें घरतिर । काका पनि ‘बनमाराले सतिसाल ढालेन’ भन्दै बस है ।